Nlegharị Anya Na-alaghachi Ngwa Ngwa n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Nlegharị Anya Na-alaghachi Ngwa Ngwa n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa
News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem njem nleta na-alaghachi nwayọ nwayọ ma laghachi na East Africa mgbe mpaghara mpaghara meghere mbara igwe ha na ókèala ala maka ndị njem ezumike mpaghara na ụwa.
Ọtụtụ mba ndị dị n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa emeghewo mbara igwe ha nke ọma ịnabata ndị njem nleta dịka Oria ojoo COVID-19 ọnụọgụgụ na-agbada n'ọtụtụ steeti mpaghara yana mba ọ bụla na-ewere usoro nchekwa.
Kenya, Uganda, na Rwanda emepeela mbara igwe ha n’agbata ọnwa Ọgọst na Ọktọba mgbe Tanzania mechara ụdị ihe ahụ na ngwụcha ọnwa Mee afọ a.
Mkpebi Kenya na Rwanda imeghe mbara igwe ha n'etiti ọgba aghara na ikpe COVID-19 na-eso mkpebi ndị yiri nke a na Tanzania na South Sudan na June.
Flightsgbọ elu nke ụgbọ elu na Kenya maliteghachiri na July 15, otu izu abụọ mgbe President Uhuru Kenyatta kwuchara usoro mmeghe ahụ ma kwuo na mba ahụ ga-anakwere ụzọ ichere na mgbanwe ọ bụla na usoro mgbochi ọ guzobere kemgbe ọnwa Machị.
Kenya mepere mbara igwe ya mgbe ahụ kwere ka ụgbọ elu si Uganda na Etiopia, yana Rwanda na Tanzania gasịrị.
Na Tanzania, ọtụtụ ndị njem si mba ofesi na-enubata n'ogige ntụrụndụ anụ ọhịa ebe ọ bụ na njem a nke ndị njem ala Africa meghere mbara igwe ya maka ụgbọ elu mba ofesi na ngwụcha ọnwa Mee ka ọnụọgụ ọrịa COVID-19 belatara ma sie ike n'ike ya.
Mịnịsta na-ahụ maka ihe okike na njem nlegharị anya, Dr. Hamisi Kigwangalla, kwuru na nso nso a na Tanzania na-anabata ndị ọbịa niile na ebe nkiri ya mgbe ha na-edebe ụkpụrụ nduzi iji gbochie mgbasa nke COVID-19.
Na 2019, Tanzania natara ndị njem nleta nde 1.5 ma mepụta ijeri US $ 2.6.
Kemgbe ọnwa Julaị nke afọ a, ụgbọ elu mba ofesi tinyere Etiopia, Turkish, Emirates, Oman, Switzerland na Rwanda Airs, Qatar na Kenya Airways, tinyere Royal Dutch (KLM) na Fly Dubai amalitela njem ụgbọ elu na Tanzania.
Nleta nleta na saịtị ole na ole na Northern Tanzania na akụkụ nke Kenya egosila na mgbake nke njem nleta East Africa ya na ndi njem nlegharị anya nke mba ahuru ka ha na ebe ndi njem na ndi njem.